Home Wararka Dibada Xisbiga Shaqaalaha oo ku guuleystey doorashadii Ustraaliya
Xisbiga Shaqaalaha oo ku guuleystey doorashadii Ustraaliya
Doorashadii baarlamaanka ee Sabtidii ka dhacday dalka Australia ayaa soo afjartay muddo ku dhow toban sano oo xisbiga Conservative-ka uu talada dalka hayay. Raiisel wasaaraha xilka kasii dagaya Scott Morrison ayaa qirtay guuldarada habeenkii xalay ee doorashada.
Maalinta Talaadada, ra’iisul wasaaraha cusub, Anthony Albanese ee Xisbiga shaqaalaha, ayaa u matali doona Australia shir madaxeed ka dhacaya Tokyo. Isla miiska waxaa fadhiya Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, Ra’iisul Wasaaraha Japan Fumio Kishida iyo Ra’iisul Wasaaraha India Narendra Modi.
Guushan waxay wax badan ka sheegaysaa waddankeenna quruxda badan in wiil ay dhashay hooyo keligeed ah oo hawlgab ah uu caawa hortiinna soo istaagi karo isagoo ah Ra’iisul Wasaaraha Australia ah, Albanese yaa sidaas yiri kadib guushii xibigiisa.
Anthony Albanese ayaa ku dhawaaqey in uu ka takhalusaayo kala qaybsanaanta dadka Australia.
Waxaan filayaa in dadku ay rabaan inay wada shaqeeyaan, dib u eegaan danaha ka dhexeeya, diiradda saaraan hadafka guud. Waxay ila tahay in dadku ay ku filnan tahay kala qaybsanaan ay soo arkeen, waxa ay hadda rabaan oo ah in dal ahaan loo midoobo, waana midda aan rabo inaan hoggaamiyo.
Albanese waxa loo doortay baarlamaanka sannadkii 1996-kii, waxaana lagu tilmaama siyaasi khibar sare leh.
Previous articleKoox hubeysan oo diley nin ka tirsanaa Dowladda Hoose ee Gaalkacyo
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble oo mar kale la kulmay Madaxweynaha Imaaraatka
Buundada isku xirta dalalka Shiinaha iyo Ruushka oo xariga laga jaray.
(Cumar Filish) ayaa maalintii labaad ka qeybgalaya Shirka Golaha Wadatashiga Qaranka
Guddiga dhismaha guriga madaxweyne Farmaajo oo war cusub soo saaray